Xeebaha Giriigga: 10 ruux ayaa la badbaadiyay halka la baadi-goobayo kuwo kale. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xeebaha Giriigga: 10 ruux ayaa la badbaadiyay halka la baadi-goobayo kuwo kale.
Xeebaha Giriigga: 10 ruux ayaa la badbaadiyay halka la baadi-goobayo kuwo kale.
Howlgal lagu badbaadinayo Tahriibayaal ka tagay Dalka Turkiga kuna sii jeeday Giriigga gaar ahaan Jasiiradda Lesbos ayaa socda, waxaana lagu guuleystay in la badbaadiyo 10-ruux sida ay sheegeen saraakiil u hadashay Maamulka Jaziiradda.
Doon ay la socdeen dadkaan ayaa degtay inkasta oo aan la sheegin sababta ka dambeysay balse waxaa la waayay saddex ruux oo ilaa haatan baadi-goobkoodu uu socdo sidaas waxaa Wakaaladda Wararka AP u sheegtay mid kamid ah saraakiisha howshaas ku howlan.
Ciidamada ilaalada Xeebaha Giriigga ayaa gacanta ku dhigay 10-ka ruux ee la badbaadiyay, waxaana ay geeyeen goob gaar ah si ay u hubiyaan xaaladda caafimaad, kadibna ay u xog-wareystaan.
Dhalashada Dadkaan si dhab ah looma shaacin balse waxaa loo badinayaa in ay kasoo jeedaan Bariga dhexe, Afrika & Qaaradda Aasiya oo tahriibayaasha badankooda ay kasoo jeedaan sida lagu ogaaday xog uruurin lagu sameeyay.
“10 ruux ayaa la badbaadiyay waxaana gacanta ku haaya Ciidanka Ilaalada Xeebaha Giriigga, marka la hubiyo caafimaadkooda waxaa lagu wareejinayaa Hay’adaha ku shaqada leh qaabilidda Tahriibayaasha oo marinaya nidaamka ay u dejiyeen soogalootiga” ayuu yiri sarkaal la hadlay Warbaahinta.
Tahriibayaasha ugu badan ee isaga kala gudubta Turkiga iyo Giriigga waxa ay u kala dhasheen Soomaaliya, Suuriya, Eretareeya, Itoobiya iyo muwaadiniin kale oo safar dheer u gala sidii ay u tagi lahaayeen Dalal dhaca Qaaradda Yurub.
Previous articleDuqeyda Koofurgalbeed oo ku xirey Shuruud in lagu qabto doorasho magaalada Baydhabo
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo soo dhaweyay shaacinta musharaxiinta Aqalka Sare ee Koofurgalbeed